'ငါ့ရဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံနဲ့အစောင့်အကြပ်တွေကငါ့အတွက်ထောင်သောင်းချီကုန်ကျခဲ့တယ်' (Martin Daubney ကလူရွယ်ကိုလူတွေ့မေးမြန်းခြင်း) - Your Brain On Porn
'အပြာနဲ့အစောင့်အကြပ်တွေကိုငါ့ရဲ့စွဲလမ်းမှုကငါ့ကိုထောင်ပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးစေခဲ့တယ်' (Martin Daubney နှင့်လူငယ်အင်တာဗျူး)
စောင့်ကြည့် porn တစ်ခုစွဲဖြစ်လာသည်, ပြီးတော့တစ်စျေးကြီးအစစ်အမှန်ကမ္ဘာအလေ့အထသို့ကူးတွေဆီကိုကူးစက်လာသောအခါဘာဖြစ်မည်နည်း အဘယ်သူ၏ဘဝနီးပါးပျက်စီးခဲ့သည်တစ်ဦးလုလင်မာတင် Daubney ဆွေးနွေးပွဲ
မိမိအမှု၌, မိန်းကလေးများခေါ်ထုတ်: အဘယ်သူ၏ကနဦးစားသုံးမှုအခမဲ့ porn တစ်ခုစျေးကြီး, paid-အဘို့အတှေ့အကွုံမြားသို့လှည့်အသုံးပြုသူများအများ၏ခန့်မှန်းတစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းများထဲမှ: Rundeep, 23 တစ်ဦးညစ်ညမ်းရဲ့အိပ်မက်ဖြစ်ပါတယ်။
Rundeep, ဘာမင်ဂမ်ကနေတကယ်သူကို real-လိင်တွေ့ဆုံသုံးစွဲငွေဘယ်လောက်သိကြပါဘူး။ သို့သော်ပျမ်းမျှ£ 900 မှာအချိန်မိန်းကလေးတွေ 50 မှတက်ကိုအသုံးပြုတော်မူပြီးမှ, တစ်ဦးရှေးရိုးစွဲခန့်မှန်းချက်£ 45,000 ၏ဒေသထဲမှာထားပေလိမ့်မည်။
လူတွေပြောတဲ့အခါ: "ညစ်ညမ်းအခမဲ့ porn ကွာပေးခြင်းထဲကငွေရှာကြဘူးဘယ်လို?" Rundeep အဖြေအသက်ရှူခြင်း, တစ်ဦးလူနေမှုဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုငါ့ Channel ကို 2013 တီဗီရှိုး, အဆိုပါဦးနှောက်တွင် Porn ရိုက်ကူးပြီးသွားချင်ပါတယ်ထိုနောက်ငါပထမဦးဆုံးအောက်တိုဘာလ4အတွက် Rundeep တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ငါလူနေအိမ် "porn rehab" သင်တန်း Paula ခန်းမ, ဗြိတိန်ရဲ့နံပါတ်တစ်လိင်နှင့်ညစ်ညမ်းပွေး, အခန်းမပြန်လည်ထူထောင်ရေးသင်တန်းမှာသူ့ကို (နှင့် Calum ဟုခေါ်တွင်သည်အခြား 19 နှစ်အရွယ် porn "စှဲလမျးသူ") နဲ့ကုန်ကြမ်းများနှင့်အပြင်းအထန်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနင်္ဂနွေကုန် စွဲ psychotherapist ။
ယနေ့ငါ Rundeep ဟာ Southbank Centre ကိုဖွင့်ရက်ဇာတ်စင်ပေါ်တွင်အသက်ရှင်နေထိုင်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းပါလိမ့်မည် ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲတော်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်။ သူကအချိန်ပြည့်အလုပ်အတွက်, ချောမောရှက်, ဆွဲဆောင်အားကောင်းလှတဲ့ဖြစ်ပြီး, အပေါ်ယံဒါအလွန်သာမန်: သူနဲ့တူနေတဲ့ညစ်ညမ်းသို့မဟုတ်လိင် "စှဲလမျးသူ" ကြည့်သောအရာကို၏ဒဏ္ဍာရီပေါကျကှဲသောကွောငျ့ငါတလျှောက်လာသူ့ကိုဖျောင်းဖျ။
ငါအထီး porn နှင့်လိင် "စွဲ" ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့စှနျးကြသည်မဟုတ်ကြောင်းရဲ့ WoW အကြီးအကျယ်အမျိုးသမီး, အမျိုးသမီးပရိသတ်ကိုပြသနိုင်ဖို့လိုအမြိုးသမီးတ-မုန်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများအတွက်ရေငတ်ပေမယ့်သာမန်ဖြစ်နိုငျသညျ, အစခြယ်လှယ်ဖြစ်လာများနှင့်ပျက်စီးနိုင်သူအားနည်းချက်လုလင်တို့သည် စက်မှုလုပ်ငန်းများက။
Rundeep ရဲ့အမှုလွန်ကဲဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, porn, တစ်သဘောလည်းသားကောင်များသို့လူတို့သညျကိုဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ ဒီနေရာတွင်ကသူ၏ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်။
"ငါသည်လူတိုင်းကလုပ်နေတာကြောင့်ငါ 16 နှင့်တစ်နှစ်ခွဲမှာကျောင်းမှထွက်ခွာသွားသည့်အခါ porn ကို အသုံးပြု. စတင်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်လုံလောက်အောင်ငါ့ကိုမပေးခဲ့ပါဘူး။ ငါ porn နှင့်အတွေးထဲတွင်မိန်းကလေးများကြည့်ရှု: ငါသူတို့နှင့်အတူစစ်မှန်သောလိင်ဆက်ဆံချင်ရုံသူတို့ကိုကြည့် masturbate မဟုတ်ပါဘူး။
"ထိုအခါငါ '' သင့်ရဲ့ဧရိယာထဲမှာတွေ့ဆုံမိန်းကလေးများ 'ဟု XVideos.com က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်အသေးစားကြော်ငြာသတိပြုမိသည်။ ငါကျပန်းတဦးတည်းအပေါ်နှိပ်လိုက်ကြောင့်သူတို့ကိုသင်ပေးဆောင်လျှင်မိန်းကလေးငယ်များကိုတက်ဘို့အဘယ်မှာရှိတစ်ဦးအစောင့်အကြပ်ဆိုက်ငါ့ကိုအမှီထားတော်မူ၏။
ကအရူးပိုက်ဆံနဲ့တူသလိုပဲနာရီဝက်အဘို့£ 100 အထိမှာ, ဒါပေမယ့်ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးအစောင့်အကြပ်ငါ့ 18th မွေးနေ့အပေါ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆက်ဆံဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် - "ငါပထမဦးဆုံးမှာဦးနှောက်အာရုံကြောဖြစ်ခဲ့သည်။
"ငါသည် 20 မိနစ်ကွာငါအသက်ရှင်နာရီဝက်အဘို့£ 80 paid ရှိရာကနေဟိုတယ်အတွက်သူမ၏တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ကိုယ့်ကဒီကြီးမား buzz တယ်။ ငါပိုကောင်းဘာမှစဉ်းစားလို့မရဘူး။ ငါလွှမ်းမိုးတယ်: တက်ချည်ထားလေ၏။ ငါကအရူးကြီးလိုဘာမှပြုသောအမှုဘယ်တော့မှင်။
"မကြာခင်မှာပဲ porn ငါ့ဘို့လုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ငါစောင့်အရှောက်သို့ ပို. ပို. တယ်။ ခုနစျပါးသို့မဟုတ်ရက်သတ္တပတ်ရှစ်ပတ်အတွင်းပြုလုပ်ထိန်းချုပ်မှုထဲကရတယ်။ ငါတစ်ပါတ်တစ်ကြိမ်လူအပေါင်းတို့သည်လမ်းမန်ချက်စတာသွားရောက်နှင့်အတူတူပင်မိန်းကလေး£ 100 အချိန်ပေးဆောင်ချင်ပါတယ်။ ငါမန်ချက်စတာလီဗာပူးလ်, ဘာမင်ဂမ်, လိဒ်အတွက်ပုံမှန်ခဲ့ - ငါရပျလုံးကိုကျော်သူတို့ကိုတယ်ချင်ပါတယ်။
"ကျွန်တော်တစ်လငါ skint ကြီးနှင့်ငွေချေးခဲ့ပေမယ့်ငါလုပ်နေတာဘာဘယ်သူ့ကိုမှမပြောခဲ့ပါဘူး။ ငါနေဆဲအိမ်မှာနေထိုင်နေနှင့်ငါ၏တစ်ခုလုံးကိုလစာဖြုန်းခဲ့ - စောင့်အရှောက် - on တစ်ခုခမ်းနားကျော်တစ်လ။
"ဟုအဆိုပါမိန်းကလေးငယ်တစ်ဦးအတွက်ခြောက်လသင်အဘယ်ကြောင့် porn သို့ကိုယ့်ကိုကိုယ်မရကြဘူး '' ဟုမေးသော်, အဲဒီအစားပိုက်ဆံဖြုန်းသင်ပိုက်ဆံ '' စေနိုင်ပါတယ်။ သူတို့တစ်ပါတ်£ 3000 အထိဝင်ငွေနိုင်ကြောင်းပြောတယ်, ထိုသို့အားလုံးငွေသားပါပဲ။
လူများကသို့ရနိုင်အဘယ်ကြောင့် "ကျွန်မတွေ့နိုင်ပါသည်။ ငွေကို, အဘက်ဇ်, စွဲလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ porn ကြယ်များနှင့်အတူလိင်ရှိသည်ဖို့ပေးဆောင်တဲ့ - ငါကြောင်းကိုပိုကောင်းတဲ့အလုပ်အကိုင်အစဉ်းစားလို့မရပါဘူး။ ငါ '' ဒီတစ်ခါလည်းဒီဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်သလဲ? 'ထင် ငါကလုပ်နေတာမထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းကြောင့်။ ငါ porn ကြယ်စုံတွဲတစ်တွဲအားမိန့်များနှင့်သူတို့ကလုပ်ဖို့ငါ့ကိုအားပေးတယ်။ ငါစမ်းသပ်ရိုက်ကူးစီစဉ်ပေးပေမယ့်ဖွင့်ဖွင့်မပေးခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်မအသက်တာ၌နောက်ပိုင်းမှာအဘို့အကြှနျုပျ၏ဂုဏျသိက်ခာကိုဖျက်ဆီးချင်ကြဘူး။
"ငါသည်မိန်းကလေးငယ်တဦးအဘို့အလဲစတင်ခဲ့ပြီးနှင့်သူမ၏ထွက်မေးတယ်။ သူမသည်လက်ထပ်ခဲ့ - ငါမသိခဲ့ပေ။ သို့သော်ထို့နောက်သူမကသူ့ကိုအတူတက်ကွဲငါတို့သည်ရက်သတ္တပတ်၏စုံတွဲတစ်တွဲများအတွက်သွားလာရင်းအပ်ပေးတော်မူ၏။ ဒါပေမယ့်သူမပါသေးတစ်ခုအစောင့်အကြပ်ကြီးရပ်တန့်မည်မဟုတ် - သူထံမှသူမ၏လူနေမှုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
"ဒါဟာငါ့ကိုကမောက်ကမပေမယ့်တစ်ဦးညစ်ညမ်းကြယ်ချိန်းတွေ့၏ kudos ကြီးတွေဖြစ်ခဲ့သည်။ အကြှနျုပျ၏အိမ်ထောင်ဖက်ငါဒဏ္ဍာရီထင်။ ကျွန်မသတိပြုမိတယ်, ငါလှပတဲ့မိန်းကလေးနှင့်အတူလိုချင်ဘဝနှင့်သူမအကြှနျုပျကိုအကြီးအလိင်ကိုပေး၏။ ငါကပိုအဘို့မမေးနိုင်ဘူး။
"ဒါပေမယ့်သူကအလုပ်မလုပ်ဘူး။ ငါလေးတွေလိုအခြေချချင်ခဲ့ပေမယ့်သူမမရကိုပြု၏။ သူမသည် 32 ကြီးနဲ့ကျွန်မ 20 ဖြစ်ခဲ့သည်။
"ကျွန်မတစ်ခုအစောင့်အကြပ်အသုံးပြုသောအခါတိုင်းကျွန်မဘက်ဇ်ရှိသွားတာပေါ့, ထွက်ကြွလာပေမယ့်နာရီဝက်အကြာတွင်ပျောက်ခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက်ငါအခြားတဦးတည်းချင်တယ်။ အဆိုပါမိန်းကလေးငယ်ငါအရူးထင်။ ည၏တစ်ဦးကစုံတွဲတစ်တွဲငါလေးငါးမိန်းကလေးငယ်များကိုအသုံးပြုဖို့အပေါင်းတို့နှင့်ငါ၏အပိုက်ဆံမှုတ်ချင်ပါတယ်။ ငါပင်ပဉ္စမတဦးတည်းအပြီး, ပိုမိုအလိုရှိပင်ပန်းတယ်ဘယ်တော့မှမ။ ငါကအပေါ်သယ်နိုင်ဘူးသိတယ်။
"ဒီကြွေးမြီ၏စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်လူတွေပိုက်ဆံအဘို့အကြှနျုပျကိုခြီတောင်းဆိုငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက် topping စဉ်းစားနိုင်အောင်အလွန်ကြီးစွာသောဖြစ်လာခဲ့သည်။ ငါနက်ရှိုင်းသောစိတ်ကျရောဂါရှိခဲ့ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာအကြွေးနဲ့ကျွန်မတိုက်ပွဲတွေ၏စုံတွဲတစ်တွဲသို့ရတယ်။
"ငါ့ကိုမကယ်သောအရာနှစ်ခု TV နဲ့လက်ဝှေ့သွားခဲ့ကြသည်။ တီဗီပေါ်သို့ Going ငါ့ကိုယခုဘဝအကြှနျုပျအဘို့မဟုတ်ခဲ့နားလည်သဘောပေါက်စေတော်မူ၏။ ငါသည်ငါ၏အကြံအစည်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ တဖန်ငါလက်ဝှေ့တက်ကို ယူ. ငါ့အမျက်နှင့်အတွေးများကိုထိန်းချုပ်ထား။
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ငါညစ်ညမ်းရုပ်ထွက်လာပေမယ့်နေရာတိုင်းမှာနေရာတိုင်းမှာဖုန်းတွေ၊ လက်တော့ပ်တွေပေါ်မှာရှိနေလို့ပါ။ အခုတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်မလိုချင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်တခြားသူတွေမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲလာတဲ့ပုံစံနဲ့ညစ်ညမ်းမှုနဲ့လိင်ဆက်ဆံတာကိုငါလုပ်နေတုန်းပဲ။ ဒါဟာစွဲလမ်းမှုတစ်ခုလိုပါပဲ ၎င်းသည်ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိသော်လည်း၎င်းမှာရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
ငါ porn watched နောက်ဆုံးအချိန်နှစ်ပတ်အကြာခဲ့ပေမယ့်ယခုမှသာနှစ်ကြိမ်တစ်လပါပဲ။ ငါဒီဇင်ဘာလကတည်းကတစ်ဦးအစောင့်အကြပ်မသုံးခဲ့ပါ။
"ငါသည်ဖြစ်ကောင်းငါးနှစ်အတွင်း 800-900 အမျိုးသမီးတွေဘေးတို့နှင့်အိပ်ပျော်။ ငါရရှိခဲ့ပါတယ်တိုင်းတစ်ပြားမှကုန်ပြီးပို။ ငါမယ့်အစားကောင်းတဲ့အိမ်သူအိမ်သားဝယ်နိုင်တယ်။ "ငါသည်ငါ့နောက်ဆုံးချေးငွေကိုချွတ်ပေးဆောင်တာနဲ့ကျွန်မနောက်ဆုံးတော့မေလအတွက်အကြွေး-အခမဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်။
"ငါသည်နောက်ဆုံးတော့ယခုငါ၏အ Self-လေးစားမှုရရှိပါသည်။ ဒါကအဖိုးမဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ "